Posted by : ကိုထက် Saturday, September 3, 2011
ဟုတ်ကဲ့ .. ရလာတဲ့ပုံကို CTRL+J နှိပ်ပြီး ပွားလိုက်ပါ ...
list ကျလာရင် solid color ကိုရွေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် Foreground color ကို အနက် / အဖြူဖြစ်အောင်လို့ .. အောက်မှပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါ ..
ပြီးသွားရင် .. အောက်က setting လေးအတိုင်းထားပြီး .. rectangle တစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ် ..
ပြီးရင် Layer 1 ကို ကလစ်ဖိပြီး အပေါ်ဆုံးနေရာရောက်ရင် လွှတ်ချလိုက်ပါ ..
ပြီးရင် layer menu ထဲက create clipping mask ကိုရွေးလိုက်ပါ ... ဒါဆိုခုလိုဖြစ်သွားပါပြီ ..
ဟိုက် !!! ပုံရွေးမှားဘီ .. မထူးတော့ဘူး .. ဆက်ပြောရတော့မှာပဲ .. ပြီးသွားရင် .. ခုနက rectangle ဆွဲခဲ့တဲ့ layer ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီး blending options ထဲဝင်လိုက်ပါ ...
blending options ထဲဝင်ပြီးရင် အောက်က setting တွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ပါနော် ..
အခုဆို ကိလေသာမပါပဲ ကြည့်ရင်တော့ တော်တော်လေးချစ်စရာလေးပါ .. ပုံစံလေးပြောတာ ... ပုံကိုပြောတာဟုတ်ဘူး ... ^_^
ပြီးရင် အဲ့ဒါ black rectangle ရယ် clipping mask လုပ်ခဲ့တဲ့ layer နှစ်ခုကို select ပေးပြီး Group ဖွဲ့လိုက်ပါပြီ
ပြီးသွားရင် အဲ့ဒီ Group 1 ကို ပွားပါမယ် .. ငါးခုတိတိပွားလိုက်မယ် .. အောက်ကအတိုင်းပွားပါ ..
ပြီးရင် Group 1 ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ Group လေးခုကို မျက်လုံးပုံလေးမှာ ကလစ်ထောက်ပြီး ပိတ်လိုက် ..
ပြီးရင် Group 1 ဘေးနားက မျှားလေးကို click ထောက်ပြီး ဖြည်ချလိုက်
ပြီးရင် shape layer ကို select ပေးပြီး မူတူးကိုယူလိုက် .. အဲ Move tool ကိုယူလိုက်လို့ပြောတာ . ဟီးဟီး
အဲ့ဒီ Move tool လေးကို ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့လုပ်လို့ရတာတွေ့လိုက်မယ့် .. ဒါပေမယ့် သူကနေရာမှန်လို့ မရွှေ့ဘူး ..နော် .. CTRL+T ( Edit Menu / Free Transform ) နှိပ်ပြီးတော့ နည်းနည်းလောက်လှည့်လိုက်ပါ ...
ပြီးသွားရင် Enter နဲ့အဆုံးသတ်ပြီး တော့ .. Group 1 copy တစ်ခုကို မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ပြီး .. အဲ့ထဲက rectangle shape လေးကို ပဲ select ပေးပြီးတော့ Move လုပ် Ctrl+T လုပ်ကြည့်ပါဦး ..
ပြီးရင် ကျန်တဲ့ Group တစ်ခုချင်းစီကိုလည်း
black rectangle shape ကို select ပေး
Move Tool နဲ့ရွှေ့
CTRL+T နဲ့ လှည့်ချင်လှည့်ကြီးချင်ကြီး..............
ဒါဆိုခုလိုလေးရလာပါမယ် .. လွယ်လွယ်လေးပါ ...